Mobile Top Up – CB Points
CB Gift Cheque
Points များဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ရန်
လက်ဆောင်များ ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်း မပြုလုပ်မီ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား သေချာစွာဖတ်ရှု့ပါ။
၅၀၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်
လက်ဆောင်ပြန်လည်လဲလှယ်မည့် ဖုန်းအော်ပရေတာကို ရွေးချယ်ပါ။
ငွေဖြည့်ကဒ်မှာ ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ဖြစ်၍ ရမှတ် ၅၀၀၀ မှတ်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Aလက်ဆောင်ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းအား ပြီးစုံစွာ submit ပြုလုပ်ပြီးပါက system မှ သင်၏ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါက သင့်ထံသို့ လက်ဆောင်ပြန်လည်လဲလှယ်မှု အောင်မြင်ပြီးဆုံးကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ကုတ်နံပါတ်နှင့်အတူ ပုံမှန် ပြုလုပ်နေကျအတိုင်း ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ထားသော ဖုန်းအော်ပရေတာအတိုင်း ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါက system မှမှားယွင်းနေသည်ဖြစ်ပြီး cbpoints@blm-mm.com သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် +၉၅၄၅၅၅၈၈၈၇၉ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပါက Submit ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပြီးသော ရမှတ်များကို ရေတွက်ပြီးလျှင် ၂၄ နာရီအတွင်း အီးလ်မေး သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ပြန်လည်အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လက်ဆောင်ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းအား ၇ ရက်အတွင်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အထွေထွေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
သင့်၏ရမှတ်များအား လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့မှ နောက်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိ စတင်တွက်ချက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ရမှတ်များအား အသုံးပြုပြီးပါက လစဉ် ၃၀ ရက်နေ့တွင် အသုံးပြုထားမှုများအား ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရမှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မှာ စတင်တွက်ချက်ပေးသော ပထမနေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ ရမှတ်များအား သုံးစွဲခြင်းမရှိပါက အလိုအလျောက် ပျက်ပျယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ်ပေးသည့် CB Credit ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် အဓိက ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုများအား ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများမှ cb-points.com ဝက်ဆိုဒ်တွင် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း CB ဘဏ်ဝန်ထမ်းများမှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်၍ မိမိ၏ကဒ်ဖြင့် သုံးစွဲမှုပြုလုပ်မှသာ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
CB Bank Myanmar does not sponsor, endorse or approve any third parties or the information, products or services available from any third parties referenced on this Site and disclaims all liability relating to your access to, use of or reliance upon any such third parties, information, products and services. Your use of this website is subject to the terms and conditions governing it. Please read the Web Use Agreement before using the website.